Tamin'ny volana May, nanoratra ny haino aman-jery tandrefana fa hanome an'i Brian Austin Green i Megan Fox, izay hiarahany amin'ny fisarahana taorian'ny 11 taona nanambadiany, zanany lahy. Nangina ny mpivady kintana, ary ankehitriny ny toe-javatra misy ny rain'ny zafikeliny dia nohazavain'ny rain'i Megan.
Mitahiry ny mololo
Franklin Fox, miresaka amin'ny mpanao gazety, dia nilaza fa ny zanany vavy sy ny vinantovaviny 30 taona, rehefa nianatra momba ny fitondrana vohoka, dia nanavao ny drafitry ny fisaraham-panambadiana. Hoy ny 65 taona:
"Ny zavatra rehetra azoko lazaina dia hoe miaraka izy ireo ary faly izy ireo. Hitan'i Bryan tsy tambo isaina aho, ary tena lehilahy mahafinaritra izy. "
Ny sary mivantana dia manamafy ny tenin'ny ray aman-drenin'ny mpilalao sarimihetsika Fox, izay mitombo isan'andro ny tsinay, ary ny Green isan'andro dia mianjera ao amin'ny family of paparazzi. Ireo olo-malaza mitsiky, mitazona tanana, toy ny zatovo.
25 amin'ireo olo-malaza mpanohana ny finoanoam-poana izay nanjary takalon'ireo talismanana sy famantarana
Niaiky ny tenan'izy ireo: 20 fahazarana mahatsiravina, izay notononin'ny olo-malaza
Mr. Fox tsy nahy na niniana natao (miaraka amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny zanany vavy) nanokatra ny gorodon'ny zanany fahatelo, ary nanampy hoe:
"Renibe reny mahafinaritra i Megan, mbola tsy tsapako fa hanana zanaka telo izy. Ny loham-pianakaviana dia zavatra mahatalanjona, nahatonga antsika hifanakaiky kokoa. "
Ampahatsiahivo fa efa nitondra ankizy roa mahazatra ny olo-malaza - Noa 3 taona, Bodhi 2 taona. Green dia manana zanaka avy any Vanessa Marcella - Cassius 16 taona.
Adele dia nanambady an'i Paul Drayton sy Alan Carr
Sophia Loren tamin'ny fahatanorany
Angelina Jolie sy Oscar-2016
Niresaka momba ny herin'ny reniny mikasika ny fanabeazana azy i Serena Williams
Nataon'i Matt Damon ampahibemaso ny Alisa Milano sy Minnie Driver
Sarin'i Sandra Bullock
Jennifer Lawrence dia ninamana tamin'ny zanak'i Darren Aronofsky
Ary Natalie Portman ... efa niteraka izy efa ho 2 herinandro lasa izay!
Mpanjakan'ny Holandy Willem-Alexander naneho hevitra momba ny resadresaka momba ny fifindran'ny zanany vavy ho any Shina
Nampidirin'i Kara Delevine ny hirany voalohany
Nogadraina i Lionel Messi voafonja niaraka tamin'ny fialantsasatry ny fianakaviany tao Ibiza
Ahoana no fomba handrafetana boots amin'ny tànanao manokana?
Jeans miaraka amin'ny lavaka
Ahoana ny fimamoana?
Fanesorana ny lakandranon'i lakirim-behivavy amin'ny zaza vao teraka
Sandelita misy haavony
Fikarakarana ny landihazo amin'ny volana Aogositra
Dresses - Fashion 2015
Cutlets avy amin'ny kisoa sy ny henan'omby
Mofomamy amin'ny rindrina tsy misy tasy
Josie Bisset nanambady sy nizara ny sariny mariazy
Mivezivezy ny vavonin'ny zaza